I-Riverside Cottage e-Logwood Mill
Antrim and Newtownabbey, Northern Ireland, i-United Kingdom
Yakhelwe ngo-1791 njenge-Watermill esebenzayo ikotishi lethu litholakala ngendlela ehlukile eMfuleni iBallylinney, ngaphandle nje komzila weLarne Line oya eGiants Causeway. Inezici eziningi zangempela ezifana nophahla oluvundiwe, imishayo ye-oki, izindonga zamatshe aqinile, kanye nomthombo wamanzi wamatshe wangempela. Ambalwa amakotishi anikeza izici eziyingqayizivele njengebhuloho lawo elincane eliholela emnyango ongaphambili, ingadi yangasese yonqenqema lwemifula, umsindo womfula ogeleza udlula amafasitela akho, kanye ne-olde world charm ehlanganisa nokunethezeka kwesimanje.
Ikotishi lethu eliwubukhazikhazi ekuqaleni laliyi-Watermill esebenzayo eyaqala ngo-1791, indawo yayo enhle Entwasahlobo, Ehlobo, Ekwindla noma Ebusika. Hlala, unethezeke futhi ulalele umfula ugijima eduze kwefasitela lakho, futhi ujabulele ukubonwa okuvamile kwezivakashi zezilwane zasendle zendawo, amaRobins, Izindwandwe, Amadada, Otters, Kingfishers, Squirrels, Rabbits, Hedgehogs, nezinye izinyoni eziningi ezincane zasemanzini. Ungakwazi ukujabulela umsindo ozolile womfula ovela kuwo wonke amagumbi e-cottage.
Ukufinyelela emnyango wangaphambili wendlu yethu encane kungebhuloho elincane elidlula lokho okwakuyi-Waterwheel Well. Indlu yethu encane ine-The Bedstone Double Bedroom (isitezi esingaphansi esinokufinyelela kwe-en-suite endlini yokugezela enkulu), I-Hopper Double Bedroom (isitezi sokuqala), I-Crownwheel Bathroom (phansi), I-Linney Sitting RoomI-Millrace Kitchen Diner.
Jabulela ukusetshenziswa okukhethekile kwendawo yethu yase-Lower Riverside Garden Seating, emaphethelweni omfula, ngaphansi kwe-Appletree ne-Maple Tree endala. Ngisho Nebhentshi Lokhuni, Amathebula Nezihlalo kanye ne-Gas BBQ.
Ikotishi lethu linekhishi elikhethwe kahle, elinomshini wokuwasha, ifriji yesiqandisi, i-4 Ring Ceramic Hob, i-Fan Oven, i-Microwave Oven, iketela, i-Toaster, umshini wekhofi wePod, nomshini wokuwasha izitsha. I-Bathroom ine-Bath & Shower ehlanganisiwe ehlanganisiwe nezingubo zokugqoka ezi-Fluffy Comfy Comfy. Zokomisa izinwele kuwo womabili amakamelo okulala. I-Wifi, i-Smart TV nokunye okuningi.
Nakuba Ukuziphekela ngokwakho, sinikeza nenketho yokufaka Ibhulakufesi, Izikhwama Zasemini Ezipakishwayo (ohambweni lwakho lokuhlola), Amaphakethe e-BBQ, i-Fondue Party Pack, Ukudla Kweminwe, kuhlanganise Izinketho zeVegan.
Kukhona indawo yokupaka eyanele, kanye nokusetshenziswa okukhethekile kwe-Riverside Seating Area etholakala kalula, Amaminithi ayi-15 ukusuka e-Belfast, imizuzu eyi-15 ukusuka esikhumulweni sezindiza sase-Belfast International, Amaminithi ayi-7 ukuya e-Carrickfergus, futhi itholakala ngaphandle kweLarne Line njengesango eliphelele lokuhlola i-Antrim, i-Antrim. Coast, Giants Causeway, kanye nokufinyelela okusheshayo ku-Motorway kuzo zonke izindawo zaseNyakatho Ireland.
Itholakala endaweni yasemakhaya, amamayela angu-2 nje ukusuka edolobheni elikhulu, kanye namabanga afanayo okuya emapaki endawo, kanye nezinsiza.
Izimpawu zomhlaba eziseduze zifaka iHolestone (Doagh), Mossley Mill, amaDolobha angokomlando aseBallyclare, Ballynure, Templepatrick, Doagh Straid. Ukuhamba ibangana nje uma i-Norman Carrickfergus Castle, futhi imizuzu embalwa uhamba ngomgwaqo wethu, ungakwazi nokufinyelela e-Creative Gardens (Garden Centre).
We are Alan & David, and we live in the little hamlet of Bruslee in County Antrim, close to Balllyclare, in an amazing Georgian Watermill built in 1791
Ngenkathi i-Riverside Cottage iyimfihlo, futhi izimele ngokwayo itholakala endaweni efanayo nekhaya lomndeni wethu, ngakho-ke singathintwa kalula ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Hlola ezinye izinketho ezise- Antrim and Newtownabbey namaphethelo